JARMALKA: Kaniisad u ogolaatay muslimiinta in ay masjid ahaan ugu tukadaan sababo la xiriira cudurka corona - Calanka.com
Kaniisad ku taal caasimadda dalkaasi Jarmalka ee Berlin ayaa albaabada u furtay dadka muslimiinta ah si ay ugu adeegsadaan masjid ahaan sababo la xiriira sharciga cusub ee cudurka coronavirus kaa lasoo rogay islamarkaana dadka lagu amray in ay kala fogaadaan.
Khudbaddii jimcaha ee shalay ayay muslimiintu shalay ku dukadeen salaadda, mana jiro masjid baaxad leh oo dalkaasi ku yaal kaas oo kaafin kara kala fogaanshaha dadka ee ay dowladdu soo rogtay.
Masjidka Dar Assalam oo lagu tiriyo masaajidda ku yaal dalka Jarmalka ayaanan qaadey wax ka badan 50 ruux marka loo eego sharcigan cusub ee ay dowladdu soo rogtay ee kala fogaanshaha dadka, sidaas daraadeed waxaa albaabada loogu furay kaliisadda baaxadda weyn leh ee lagu magacaabo St. Martha, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Muslimiintii ku dukatay kaniisaddaasi ayaa soo dhaweeyay gacanta ay u fidisay dowladda, waxaana ay qaarkood sheegeen in cudurkani uu muujiyay isu-soo-dhawaansho dadka diimaha kala duwan leh.
Masaajidda ku yaal dalka Jarmalka ayaa muddo isbuucyo ah xirnaa sababo la xiriira mandow lagu soo rogay dalkaasi kaas oo la xiriira xakameynta cudurka coronavirus.
Mid ka mid ah jameecadii kaniisaddaasi ku tukatay ayaa sheegay in masjidka iyo kaniisaduba ay wada yihiin “guryaha Ilaahay” balse ay ku kala duwanyihiin oo kaliya sawirrada ku xardhan gudaha kaniisadda iyo musigga lagu dhex tumo.
Monika Matthias oo ah haweeneyda “wadaadadda” ka ah kaniisaddaasi ayaa sheegtay in ay la tukatay jameecada muslimiinta ah ee ay kaniisaddeeda ku casuuntay islamarkaana ay khudbad u jeedisay.
” – Waxaan ka qeyb-qaatay salaaddii ay tukanayeen, waxaana lahaa markii salaadda lagu jiray ja, ja, ja sababtoo ah waxaan wada qabnaa wal-wal iskumid ah”, ayay Reuters ku tiri Monika.
Si kastaba, dalka Jarmalka ayaa ka mid ah dalalka uu aadka u saameeyay cudurka coronavirus, waxaana uu ka dilay dad kor u dhaafaya 8,352, isagoona uu ku dhacay dad ka badan 180.000.